Nyora neakaipisisa? zvishandiso zveGNU / Linux (ehe, zvakaipisisa) | Linux Vakapindwa muropa
Nyora neakaipisisa? maapplication eGNU / Linux
Rondedzero dzinogara dzakagadzirwa neakanakisa maapplication e…, akanakisa kugoverwa kweGNU / Linux, nezvimwe. Asi sei zvisiri a runyorwa rweakaipisisa maapplication YeGNU / Linux? Izvo zvinogona zvakare kuve zvakanaka, zvichikonzera vashandisi kunzvenga mamwe mapurojekiti asina kunaka kune chimwe chikonzero kana chimwe chikonzero, kana izvo zvisiri chaizvo zvinoshanda.
Kana iwe uchida kuziva kuti ndeapi mapikicha akaipisisa, kana asingabatsiri, aunokwanisa kuisa (kana ayo aivapo panguva iyoyo) mukugovera kwako kwaunofarira, heino runyorwa pamusoro gumi:
1 Akanyanya kusimba maLinux ...
1.1 Firefox Extension Manager
1.5 Lombard Vhidhiyo Mupepeti
1.7 Home Bank
1.8 Gnome Nanny
Akanyanya kusimba maLinux ...
Mozilla yakagadzira imwe ye akanakisa mabhurawuza, uye unodiwa nevakawanda. Firefox zvakadaro, manejimendi wayo wekuwedzera wakonzera matambudziko mazhinji munguva yakapfuura, zvichipa akawanda acho asingashandisike kana achigadziriswa. Neraki, ivo vanogadzira vanga vachishanda pane izvo kuti vavandudze.
Iyo inouya pre-yakaiswa pane distros seUbuntu. Asi ... pane chero munhu anonyatsoshandisa maapplication aya? Inofanirwa kunge iri iyo webcamNekudaro, yakave iine zvimwe zvikanganiso zvakaita kuti vashandisi vazhinji vapedzisire, senge kutadza kwechikamu, kunonoka, pakati pevamwe.
Yaizivikanwa, kunyangwe paine dzimwe nzira dzakanyanya kunaka dze rekodhi desktop paLinux. Imwe yesarudzo dzakasimba kwazvo ndeye OBS inozivikanwa. Zvakare, iyi software haina kushanda zvakanaka (kunyanya munguva yeUniity payakange isingatsigirwe), uye vashandisi vazhinji vakaiisa vakapedzisira vashandisa mamwe mapurojekiti akaita saKazam, Vokoscreen, nezvimwe.
Iyo ndeimwe yeaya madiki maapplication ekugadzira vhidhiyo mhedzisiro, asi iyo yanga isinganyanyo shanda uye yakakwana. Pane dzakawanda nguva ini ndaiziva iyo webcam zvakanaka, asi sarudzo dzekumisikidza dzaive dzisina chokwadi, uye dzimwe nguva zvikanganiso zvaikonzera kuti vhidhiyo irege kunyorwa.
Lombard Vhidhiyo Mupepeti
Iyo vhidhiyo mupepeti iyo yanga isiri kubudirira kana. Ichokwadi kuti chaive chakareruka, asi icho kupotsa kuwanda kwemabasa saka zvinonyanya kukosha kukurumidza kwako. Chaizvoizvo yaive yakaganhurirwa kune chishandiso chekucheka vhidhiyo uye nekwaniso yekutengesa kunze.
Kumwe kuzivana TV app paLinux. Iyo inobvumidza kutarisa terevhizheni chiteshi pamusoro peInternet uye yaive yakavakirwa paFirefox browser. Nekudaro, haishande chaizvo, uye kuchine zvinongedzo zveFlash-based chiteshi (zvisingawirirane) dzimwe nguva, pamwe nekuvhiringidza kwevanotanga, nezvimwe.
Imwe yeaya maapp anoratidzika zvakare echinyakare kana iri nguva ino. Iyo yakakosha software yemari ine mamwe mabugs ayo aityisa vashandisi kure. Iine yechinyakare GUI, uye ichichemera makeover.
Iyo system ye kudzora kwevabereki runako nefarious uchienzaniswa nemamwe mapurojekiti erudzi rwakafanana. Ichokwadi kuti yaibvumidza kurongedza yakatemerwa mitemo yekudzivirira kupinda kune mamwe mawebhusaiti, kudzora nguva, nezvimwewo, asi yaive nechimiro chisina kutsarukana, yakavharira zvimwe zvinhu, uye kana iwe ukaedza kuibvisa yakavharira kuwana kwese kwewebhu ...
Pakupedzisira, imwe yeaya asina kubudirira maapplication yaive Gromit. Yakagadzirirwa zvirevo uchishandisa piritsi yemifananidzo. Zvisinei, zvakakundikana pane dzimwe nguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Nyora neakaipisisa? maapplication eGNU / Linux
Microsoft inomutsa alarm: yakashanduka LemonDuck kurwisa Windows uye Linux makomputa